အညွန့်ခူးစားခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အညွန့်ခူးစားခံရခြင်း
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jun 2, 2018 in Creative Writing, Education, How To.., My Dear Diary, Think Different |9comments
ဒီနေ့ ဂုဏ်ထူးတွေပလူပျံနေတဲ့ ဘော်ဒါတစ်ခုရဲ့ အောင်စာရင်းကို ရှယ်တဲ့သူကရှယ်.. အားကျတဲ့သူကအားကျပေါ့.. ကိုယ်တွေကတော့ အတွေးတစ်မျိုးရယ်..
အစကတည်းက ဝင်ခွင့်နဲ့စစ်ချပြီး တော်တဲ့သူတွေပဲ ရွေးခေါ်သင်တဲ့ကျောင်းက အောင်ချက်ကို စိတ်မဝင်စားတာတော့ အမှန်ပါပဲ.. ကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်တဲ့ဆရာမ လုပ်ခဲ့ဖူးတော့ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားကို သင်ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ စာမတော်တဲ့ကျောင်းသားကို သင်ရတဲ့ခံစားချက်ကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်..
ပြီးတော့ ဒီကျောင်းသားတွေအကုန်လုံး ဒီလိုတော်အောင် တကယ်ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာ သူတို့မဟုတ်ပါဘူး.. ကျောင်းသားတွေရဲ့ ငယ်ဆရာတွေပါ..
ကိုယ် ဆယ်တန်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးကို သတိရမိတယ်.. ဆယ်တန်းနှစ်မှာ စာတော်တဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျောင်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်… ငါးတန်းကတည်းက တက်လာပြီး ဆယ်တန်းမှ ပြောင်းသွားတော့ ဆရာ ဆရာမတွေ ရင်နာကြတာ.. သူက ဂုဏ်ထူးတွေအများကြီးထွက်မှာ သေချာတဲ့သူ.. တစ်သက်လုံး ကိုယ်တွေပျိုးထောင်လာခဲ့ပြီး တကယ်တမ်း ကျောင်းဂုဏ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှ တစ်ခြားကျောင်းကို ပြောင်းသွားခဲ့တာလေ..
ခုလည်း ဒီလိုပါပဲ… ငယ်ငယ်ကတည်းက အခြေခံပါအောင်.. အပင်ပန်းခံသင်ပေးခဲ့ကြလို့ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးမှ တစ်ခြားကျောင်းက အညွန့်ခူးစားလိုက်တာပါ… တကယ်တော်တဲ့သူက ဘယ်မှာပဲ သင်သင်၊ ဘယ်သူနဲ့ပဲသင်သင် တော်ပါတယ်..
ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဆယ်တန်းနှစ်မှာ ဂိုက်ဆရာမခေါ်တော့ ပထမ ကိုယ်ခေါ်တဲ့ဆရာမက မသင်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့.. ဒါကြောင့် နောက်ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ သင်ရပါတယ်.. အဲဒီဆရာမက ကိုယ့်ကို အများကြီးအားစိုက်ပြီး မသင်ပေးခဲ့ရပေမယ့် စာကျက်ပျင်းပြီး အအိပ်မက်တဲ့ကိုယ့်ကို အိပ်ရေးအပျက်ခံ. အမုန်းခံပြီး စာကျက်ချိန်မှန်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာပါ.. ဆရာမသာ ဘေးက မတင်းကျပ်ရင် ကိုယ်လည်း အပျင်းကြီးနေဦးမှာပါပဲ..
ဒါပေမယ့် အောင်စာရင်းထွက်ပြီး ကိုယ်ဂုဏ်ထူးတွေပါတော့ ပထမ ခေါ်တဲ့ဆရာမက ကိုယ့်ဂိုက်ဆရာမကို ပြောတယ်တဲ့.. သူသာ ကိုယ်လာခေါ်တုန်းက လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် ခုလိုအချိန် အောင်ပွဲခံနေရမှာက သူပဲဖြစ်မှာတဲ့..
ပြောချင်တာက ဆရာ ဆရာမ လုပ်တဲ့သူတွေဟာ စာတော်တဲ့သူတွေကိုပဲ သင်ချင်ကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် စာညံ့တဲ့သူတွေကိုလည်း ငြင်းခွင့်မရှိပါဘူး.. ဒါကြောင့် စာတော်တဲ့သူတွေကိုပဲ ရွေးခေါ်ပြီး စာညံ့တဲ့သူတွေကို ငြင်းတဲ့ကျောင်းကို အထင်ကြီးလို့မရတာတော့ မတတ်နိုင်ပါဘူး..
ကိုယ့်မြို့လေးက မောင်လေး ညီမလေးတွေကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်.. မြို့မှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ဆရာတွေ ရှိပါတယ်.. ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို မွေးထုတ်ပေးပါတယ်.. ဒါကြောင့် မြို့ဂုဏ် ကျောင်းဂုဏ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာမှ မြို့လေးကို စွန့်ခွာမသွားကြဖို့ အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်..
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်
အခုလိုတော်တဲ့သူတွေချည်း.. စုသင်ပေးလိုက်တော့.. အဲဒီကျောင်သူားတွေစုထားပြီးဖြစ်နေတာပေါ့..။
ကျောင်းသူားတဦးချင်းဆီမှာက.. သာမန်ထက် ပိုတော်နေတဲ့.. မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရနေပြီး…. အဆက်အသွယ်မပြတ်ပဲဖြစ်နေမှာလေ..။
လူ့မှုဆက်ဆံရေးနဲ့.. ဆက်သွားရမယ့်ဘ၀ခရီးမှာ.. အဲဒီလို.. စုစည်းပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့.. ဘယ်ကျောင်းထွက်ဆိုတာက.. အရေးကြီးတာပဲ..။
ထင်လား သဂျီး.. လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့သူတွေချည်းပဲ စုပေါင်းပြီး အောင်မြင်တာ မြင်ဖူးသလားလို့စ်
သြော် ညံ့တု့ကျောင်းသားတွေကို ရွေးမခေါ်တည်းက ဒီကျောင်းရဲ့ အောင်ချက်က အောင်စာရင်းမထွက်ခင်တည်းက သိသင့်နေပါပြီလေ။ ဒါကြောက်ပြောတာ ငယ်ဆရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့လက်ဦးဆရာတွေပါပဲ။ သူ့တို့ရဲ့ပျိုးထောင်မှုကြောင့် အရောင်လေးတွေ တောက်လာကြတာပါ….
အခြေခံပါလာပြီးသားတွေကို အရောင်တင်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်.. အဓိကက အခြေခံမပါလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လိုတော်အောင်သင်ပေးမလဲဆိုတာကို လိုချင်တာ..
အဲ့လို ကျောင်းမျိုးတွေ မြို့တိုင်းမှာ ရှိလာအောင် လုပ်ပစ်လိုက်ရမှာရယ်….
ဟုတ်တယ်။ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်အပေါ် တကယ်အားစိုက်ပေးခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ ထုတ်ပြောသင့်တယ်။ အဲဒါလည်း ကျေးဇူးဆပ်နည်းတစ်မျိုးပဲ။